महरा र शंकर पोखरेलको वडामा कांग्रेस दोब्बर मतले विजयी, नेकपाको लालकिल्ला तोडियो. – Tufan Media News
महरा र शंकर पोखरेलको वडामा कांग्रेस दोब्बर मतले विजयी, नेकपाको लालकिल्ला तोडियो.
१५ मंसिर २०७६, आईतवार ०९:३०
दाङ। पूर्व एमालेले जितेको घोराही १६को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका तारा बहादुर डाँगीले नेकपाका उमेद्वार शुरेसबहादुर केसीलाई पराजित गर्दै लाल किल्ला तोडेका छन्। डाँगीले १२२२ मत प्राप्त गरि विजयी हुँदा केसीले १११७ मत ल्याए। स्वतन्त्र उमेद्वार जगलाल थारुले ७२० मत ल्याएर तेस्रो भए।
त्यस्तै क्षेत्र नं १ (क)मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् ।